Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka iPhone in Nokia
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka iPhone in Nokia
Waxaan raadinayaa in dhoofinta xiriirada ku kaydsan iPhone gal SIM ah, ama u dhoofin iyo aad u geli Nokia, ama telefoon kale oo kasta oo kale oo aan ahayn iPhone ah. PS: baan ka cararayaa Vista Windows!
Waa quruxsan fudud si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in Nokia, ma u baahan dadaal ugu yar. Kulli wixii aad samayn lahaydeen oo waa in ay isku dayaan qalab kala iibsiga phone hal-click - Wondershare MobileTrans . Iyadoo qalab this, aad awoodaan si ay u gudbiyaan dhammaan xiriirada on xusuusta aad iPhone ee, iyo kuwa ku iCloud, Yahoo, Exchange iyo xisaab kale si phone Nokia hal click. Intaa waxaa dheer, waa qalab virtus-free ah, sidaas darteed waxa aad dareemi kartaa lacag la'aan ah si aad u isticmaasho.
Download waxtar qalab kala iibsiga phone oo ay leeyihiin isku day ah.
Fiiro gaar ah: Saxiix ee xisaabaha, sida iCloud, Exchange iyo Hotmail, on your source telefoonka, marka aad doonayso inaad ku wareejiso kaadhka xusuusta phone Ahaado.
Tallaabooyinka fudud in aad nuqulka xiriir ka iPhone in Nokia
Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka fudud oo ku saabsan sida loo nuqul ka xiriirada iPhone si aad u Nokia 1 click. Hadda, aan ka eeg tallaabooyinka wada.
Tallaabada 1. Daahfurka MobileTrans kombiyuutarka dib markii la rakibey
Bilowga aad, rakibi iyo abuurtaan MobileTrans kombiyuutarka. Suuqa ayaa aasaasiga muujinaysaa ilaa shaashadda kombiyuutarka. Dooro Phone in ay hab Transfer Phone.
Fiiro gaar ah: Wondershare MobileTrans si buuxda u badan Nokia phone ama kiniin socda Symbian 40, Symbian 60 iyo Symbian ^ 3.
Tallaabada 2. Iska aad iPhone iyo Nokia xiran
Isticmaal fiilooyinka USB ah in labada mid ah iPhone iyo Nokia phone xidhmaan kombiyuutarka. Sida aad ka arki, si aad iPhone lagu muujiyay sida il phone on Murayaad bidix, iyo telefoonka Nokia ay u muuqataa on, magacaabay telefoonka xaq u socoto. Haddii aad leedahay xiriir badan oo aan waxtar lahayn oo ku saabsan Nokia, waxaad riixi kartaa "data Clear hor nuqul". Marka aan sidaa yeelno, dhammaan xiriirada hadda aad Nokia waa laga tirtirayaa hor xiriirrada Nokia badbaadiyo.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in lagu wareejiyo xiriirada, muusig iyo sawiro ka phone Nokia si iPhone, waxaad riixi kartaa "Flip" oo raac tallaabooyinka la mid ah.
Tallaabada 3. Transfer xiriirada iPhone in Nokia
Markaas, guji "Start Copy". Habka kala iibsiga xiriir bilaabmin. Daaqadda pop-up ka, waxaad eegi kartaa habka xiriir kala iibsiga. Marka lagu sameeyey, aad guji "OK" dhammayn kala iibsiga.
Bal eeg, waa si fudud inuu u dhaqaaqo xiriirada ka iPhone in Nokia iyadoo la kaashanayo MobileTrans. Dhab ahaantii, MobileTrans sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso xiriirada, fariimaha qoraalka ah, sawirada iyo music ka Nokia phone ama kiniin in Android, oo nuqul ka xiriirada Android dib ugu Nokia. Intaa waxaa dheer, waxa ay keeneysaa in ay u guuraan xogta u dhexeeya iPhone, iPad iyo iPod iyo Android fudayd.
Isku day qalab kala iibsiga phone si dhoofin xiriirada ka iPhone in Nokia.
Wax walba oo aad ka ogaato ku saabsan iPhone kaabta Password.
Top 10 Beddelka TiVo App u iPad iyo iPhone